Azania - Wikipedia
Azania waa Dhulka Soomaaliyeed ee dhinaca koonfurta laga soo bilaabo Baledwayne ilaa iyo Kenya iyo Ithobiya xuduudahooda laga gaaro. Magacaan waxaa bixiyay Masaaridii hore oo dhulka Soomaaliyeed u soo baayacmushtari jirtay kuwas oo ka tirsanaan jiray Faraacintii Masar maamuli jirtay dhalashadii Nabi Ciise ka hor "NNK". Masaaradii markii ay yimaadeen dhulkii Soomaliyeed waxaa ay kula kulmeen laba shay oo kala duwan oo laga kala helay dhinaca waqooyi iyo dhinaca koonfureed. Dhinaca waqooyi waxaa ay ka heleen geedo udgoon oo aad u carafa oo ay u isticmaali jireen waxyaalaha udugga; halka dhinaca koonfureedna ay ka heleen Barwaaqo, Baad iyo biyo leh taas oo ay u bixiyeen magacaan "Azania". Dhinaca waqooyi ee Soomaliya waxay u bixiyeen "Punt" dhulkii udgoonaa, dhinaca kalena "Azania" dhulkii Barwaaqada ahaa.
Dhulkaan Azania waa inta u dhaxaysa labada Webi ee Soomaliya marta. Webi Shabeelle iyo Webi Jubba. waana dhulka ugu barwaaqada badan Soomaaliya oo ay ku noolaan karaan Dad iyo Duunyo. dhulkaan waxaa isaga soo dabamaray Boqortooyin maamuli jira ilaa iyo muddo badan, waxaa ka mid ahaa Boqortooyooyinkaas: Boqortooyada Geledi, Boqortooyada Ajuuraan iyo kuwa kale. Boqortooyooyinkaan waxaa ay ka mid ahaayeen kuwii ugu fican ee Soomaaliya soo mara gaar ahaan dhinaca koonfureed waxaana ay gaarisiyeen dhulki ay maamuli jireen hor mar siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mid bulsho. Dhinaca waqooyi waxaa maamuli jiray Boqortooyadii Zaylac.
Khubarada cilmiga casriga ah ee Taariikhda waxaa si buuxda isugu raaceen in dhulkaan uu yahay dhulka hadda ay deganyihiin, leeyihiina Bulshada Soomaaliyeed ee "Reewing" ama Raxanwayn. Ummadaan dhulka ay degto ayaa ah kan ugu barwaaqada badan Soomaliya marka laga hadlaayo khayraadka dabiicga ha oo Ilaahay nagu manaystay kaas oo Soomaalida oo dhan ay xusul duub ugu jiraan sidaa ay halkaas mar un lugta ula galin lahayn balse cashar lama ilaawaan ah ay kula kulmeen sanadka markuu ahaa 1999-kii ka dib markii si qasab ah looga soo eryaday iyagoo waliba balan qaaday in mar dambe ay cag soo saari doonin balse ay ogolyihin Soomaalinimo. Waana tii markii hore ay diidanayeen in Soomalinimada wax lagau qaybsado oo rabay in ay marka hore boob wax ku radiyaan hadase runtu run gaartay.
Sida laga soo bartay Taariikhihii iyo Ilbaxnimooyinki hore ayaa cadaynaya in Ummada walba oo degan meel biyo leh ay yihiin kuwa ugu ilbaxsan oo nabaduna ay mar walba raadiyaan si ay dannahooda ay u gaareen. dhinaca kale bulshada xoolo-dhaqatada waa midda ugu dhibka badan oo ilbaxnimadu ay ku yartahay waase ay taariikhdu cadaynayso.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Azania&oldid=156706"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 8 May 2016, marka ee eheed 18:07.